R/wasaare ku xigeenka dalka oo Kormeer ku tagay Isbitaalka Erdogan ee Ex Digfeer – Radio Muqdisho
R/wasaare ku xigeenka dalka oo Kormeer ku tagay Isbitaalka Erdogan ee Ex Digfeer
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka ayaa maanta kormeer ku tagay Isbitaalka Erdogan ee Ex Digfeer isagoo u kuurgalaya adeegyada ay helaan bukaanadda halkaasi lagu daweeyo.
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Ra”iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ujeedada kormeerkiisa waxa ay ahayd u kuurgalida Xaalada caafimaad ee dadka ku jira Isbitaalka iyo qaabka wax loogu qabanayo..
Maamulaha Isbitaalka iyo Dhaqaatiirta oo isugu jira Soomaali iyo Turki ayuu warbaxin ka dhageystay Ra’iisul Wasaare Mahdi Maxamed Guuleed, waxaana ay sheegeen Maamulka Isbitaalka in si wanaagsan loogu adeego Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee adeegyada caafimaad u yimaada.
Intaasi ka dib ayuu Mudane Mahdi Maxamed Guuled Khadar wuxuu wareystay xaalada bukaanada ku jira Isbtaalka sida ay tahay iyo qaabka loogu adeego, wuxuuna u rajeeyay caafimaad deg deg ah inuu ilaah siiyo dhaawacyada ku jira Isbitaalka.
Booqashada Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka uu maanta ku tagay Isbitaalka Digfeer waxa ay qeyb ka tahay kor joogteynta iyo hubinta adeegyada bulshada Soomaaliyeed in si wanaagsan u gaaro.
Somali Government investigates 9.6 U.S dollar
Duqa Muqdisho oo Mas’uuliyiin kala duwan kula kulmay Ankara “SAWIRRO”
Duqa Muqdisho oo Mas’uuliyiin kala duwan kula kulmay Ankara "SAWIRRO"